Maxaa ka soo kordhay Xaalada degmada Balcad iyo dagaaladii maanta ka dhacay? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxaa ka soo kordhay Xaalada degmada Balcad iyo dagaaladii maanta ka dhacay?
2nd March 2018 A warsame Af Soomaali 0
Xaalada degmada Balcad ee gobolka Sh/dhexe ayaa haatan degan ka dib markii ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ay ka saareen xoogag taabacsan Al-shabaab oo maanta barqadii qabsaday.
Ciidamo gurmad ah oo ka tirsan kuwa dowlada iyo AMISOM ayaa la sheegay iney gaareen degmadaas iyagoo dagaal rogaal celis ah ku qaaday Al-Shabaabkii halkaas qabsaday oo muddo saacado ah ku sugnaa.
Sida wararku sheegayaan xoogaga Al-shabaab ayaa intii aan halkaas laga saarin waxay qalab badan ka qaateen ka dibna gubeen xafiisyada xaruntii Maamulka degmada Balcad.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in Al-shabaab ay dab qabadsiiyeen saldhiga Booliska degmadaas, iyagoo ooda ka qaaday maxaabiis halkaas ku xirneyd.
Idaacad maxali ah oo degmadaas ka howlgaleysay ayey xoogaga Al-shabaab furteen, iyagoo sidoo kale dab qabadsiiyey xarunteedii, meelaha ay gubeen waxaa kaloo ka mid ah hoyga Guddoomiyihii hore ee degmada Balcad Cismaan Xaadoole oo ay deganaayeen ciidamo ka tirsan dowlada.
Markii uu dagaalkani bilaabanayey ayey wararku sheegayaan in guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Furdug uu safar ugu soo maqnaa magaalada Muqdisho, halka ku-xigeenadiisa iyo xubnihii kale ee Maamulka ay degmadaas ka baxsadeen.
Al-Shabaab ayaa barahooda internetka ku sheegay in dagaalka maanta ka dhacay degmada Balcad iyo agagaarkeeda ay ku gubeen 13 gaari oo ay lahaayeen ciidamada AMISOM iyo xarumaha Maamulka degmada, ayna qabsadeen gaari xamuul ah oo sahay u disay ciidamada AMISOM.
Ugu yaraan toban ruux oo u badan dhinacyada dagaalamay ayaa la xaqiijiyey iney ku naf waayeen dagaalka maanta ka dhacay degmada Balcad halka qaar kale ay ku dhaawacmeen waxaana jira warar khasaaraha dagaalka intaas ka badinaya.
Ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM ayaa hadda degmada Balcad ka wada howlgalo amaanka lagu xaqiijinayo, iyadoo shacab badan oo ka firxaday degmadaas ay iyana bilaabeen iney ku soo laabtaan guryahooda, waxaana dadweynaha degmadaas ay maanta u aheyd maalin madow.
Dowlad goboleedka Hirshabelle iyo maamulka gobolka Sh/dhexe ayaan illaa hadda war ka soo saarin weerarkan lama filaanka ah ee saaka ka dhacay degmada Balcad oo ku soo aaday xili maalmo ka hor Taliyaha Qeybta 27aad ee Ciidamada Xoogga dalka Maxamuud Maxamed Macalin (Koronto) uu sheegay iney xaqiijiyeen amaanka jidka Balcad iyo Jowhar isku xira oo Al-shabaab ay dhowaanahan weeraro badan ka geysanayeen, ayna halkaas dhigeen ciidamo xoojin ah.
Kuwait- Arab Ministers Okay Urgent Aid To Yemeni, Somali Health Sectors